Tag: endrika an-tserasera | Martech Zone
Tag: endrika an-tserasera
Sehatra fitantanana salonista spa sy salon: fanendrena, fanatobiana entana, marketing, karama ary maro hafa
Salonist dia rindrambaiko salon izay manampy spa sy salon amin'ny fitantanana ny karama, ny faktiora, ny firotsahana ny mpanjifanao ary ny fampiharana ny paikadim-barotra. Anisan'izany ny: Fametraham-potoana fanendrena ho an'ny famandrihana spa sy salon amin'ny Internet - Amin'ny alàlan'ny rindrambaiko famandrihana salonista an-tserasera an-tserasera, ny mpanjifanao dia afaka mandahatra, mametra, na manafoana fotoana nifanaovana na aiza na aiza misy azy ireo. Samy manana ny fahaizan'ny tranokala sy ny rindrambaiko azo ampidirina miaraka amin'ny haino aman-jery sosialy Facebook sy Instagram. Miaraka amin'izany, ny fizotry ny famandrihana amin'ny ankapobeny dia tanteraka
Alarobia, Martsa 29, 2017 Alarobia, Martsa 29, 2017 Steve Hartert
Ny mpampiasa vola dia afaka mandrefy ROI amin'ny fotoana tena izy. Mividy stock izy ireo, ary amin'ny fijerena ny vidin'ny stock amin'ny fotoana rehetra, dia azon'izy ireo fantarina avy hatrany raha tsara na ratsy ny taha ROI. Raha mba mora ho an'ny mpivarotra izany. Ny fandrefesana ny ROI dia iray amin'ireo asa lehibe indrindra amin'ny marketing. Raha ny marina dia iray amin'ireo asa sarotra indrindra atrehantsika isan'andro. Miaraka amin'ireo angona rehetra izay miraraka
Volavola taratasy: endrika an-tserasera haingana, mora raisina ary azo ovaina
Talata, Desambra 6, 2016 Talata, Desambra 6, 2016 Douglas Karr
Ny taratasy dia ahafahan'ny olona mamorona endrika amin'ny Internet na pejy momba ny vokatra haingana, haingana, ary hametahana azy ireo araka izay itiavany azy - tsy misy fehezan-dalàna. Mora ho an'ny mpanjifanao sy ny vondrom-piarahamoninao ny mameno amin'ny findainao na amin'ny birao satria mamaly tanteraka izy ireo. Ny taratasy dia misy ny fahafaha-mamoaka endrika tsy manam-petra, mamela anao hampiditra azy ireo ao amin'ny tranokalanao, ahafahanao miditra ao amin'ny Stripe ho an'ny fandoavam-bola, na manosika ny angonao amin'ny alàlan'ny Zapier. Afaka misafidy ny anao ianao
Azafady mba andramo ireo endrika fitarihanao
Zoma 20 Novambra 2015 Alakamisy Febroary 25, 2021 Douglas Karr
Nandritra ny roa taona dia niara-niasa tamin'ny mpanjifa iray izahay izay nanambola teti-bola manan-danja tamin'ny masoivohon'ny marika hamoronana fisian-tranonkala vaovao mahafinaritra. Tonga tao aminay ny mpanjifa satria tsy nahita fitarika avy amin'ny tranokala izy ireo ary nangataka anay hanampy azy ireo. Nanao ny zavatra voalohany fanaonay mahazatra izahay, nanolotra fangatahana tamin'ny alàlan'ny pejin'izy ireo ary niandry valiny. Tsy nisy tonga. Nifandray tamin'izy ireo izahay avy eo ary nanontany